August 17, 2019 - Myitter
တကယ်စော်ပြီနော်…လာရှိုးမြို့ နမ့်တွန်းကျေးရွာအနီး တိုက်ပွဲတွင် စစ်တပ်က ရဟတ်ယာဉ်များ အသုံးပြုတိုက်
August 17, 2019 Myitter 0
နေရစ်ခဲ့ပါတော့ မဟေသီရယ်…… တောင်တွေရစ်ဝိုင်း မှိုင်းညို့ ဆိုင်းလို့ နေထွက်/နေဝင် မမြင်မသိတဲ့လျှိူမြောင်ချိုင့်ဝှမ်း တဖက်ကမ်းမှာ နိဂုံးတဘဝ ဒီလိုချုပ်ရမယ်ဆိုတာ အစက ဘယ်သိပါ့မလဲကွယ်……. ပေးတဲ့တာဝန် ငါကျေပွန်အောင်မကြောက်ရဲစွမ်း စစ်မှု့ထမ်းလျှက်မင်းကိုမလွမ်းလို့ မဟုတ်ခဲ့ရပါဘူး…… သားနဲ့သမီး ပညာပြီးအောင်တာဝန်ရှောင်တာလဲ မဟုတ်ခဲ့ရပါဘူးမဟေသီရယ်……. ဒီနေ့…ဘဝရဲ့အဆုံးအဖြတ်နေ့…… သာလွန်အင်အား လွန်များပြားတဲ့ရန်သူသစ္စာဖောက် […]
ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ နောင်ချိုဂိတ်မှာတိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်းရင်းကျဆုံးသွားတဲ့ ရဲတပ်သား ဇော်ထက်ဦး နောက်ဆုံးခရီး
ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ နောင်ချိုဂိတ်မှာတိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်းရင်းကျဆုံးသွားတဲ့ ရဲတပ်သား ဇော်ထက်ဦး နောက်ဆုံးခရီး ဝမ်းနည်းဖို့တကယ်ကောင်းပါတယ် အသက်တွေပေးဆပ်ရပါတယ် နှမြောစရာကောင်းပါတယ် အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ လူမုန်းများတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ တာဝန် သူတို့တွေရဲ့ ပေးဆပ်မှုတွေဟာ ကြက်သီးထဖွယ်ကောင်းလှပါတယ် ယန့နောင်ချိုဂိတ်မှာတိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်းရင်းကျဆုံးသွားတဲ့ ရဲတပ်သား ဇော်ထက်ဦး နောက်ဆုံးခရီး တာဝန်ကျေပါတယ်ရဲဘော် အလေးပြုပါတယ် ညီငယ်လေး […]
ကျွန်တော်တာဝန်ကျရာကျောင်းသည်တပ်မိသားစုဝင်များ၏ကလေးတွေအများစုတက်သောကျောင်းဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ကြုံတွေခဲ့ရသောမြင်ကွင်းကစိတ်မခိုင်လျှင်မျက်ရည်ကျမိမည်။ ဖခင်များမှာရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ထွက်ခွာမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျောင်းသို့သူတို့၏သားသမီးကလေးများအားလာရောက်နှုတ်ဆက်ကြရာကျွန်တော့်၏G3ကလေး မိဘ ၃ /၄ဦးခန့်လာကြသည်။ “သမီးစာကြိုးစားနော်/သားစာကြိုးစားနော်/လိမ်လိမ်မာမာနေနော်/ဆရာ့စကား/ဆရာမစကားနားထောင်နော်/ဖေကြီးပြန်လာမှာတဲ့” သားဖြစ်သူသမီးဖြစ်သူလေးများမှရှေ့တန်းထွက်စစ်ယူနီဖောင်းအပြည့်အစုံနဲ့သူတို့၏ဖခင်ကိုဖက်၍ငိုကြသည်။ကျွန်တော်G3အတန်းပိုင်ဆရာဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ရင်းမျက်ရည်ဝဲဆို့နစ်ကြွေကွဲရပါဘီလေ။ဆရာဆိုတော့ဟန်လုပ်ရင်း “သားတို့သမီးတို့ရယ်ဆရာတစ်ယောက်လုံးရှိသေးတာဘာအားငယ်စရာလိုလဲ။သားတို့သမီးတို့ရဲ့ဖေကြီးပြန်လာရင်းဆရာပါလိုက်ကြိုပေးမှာ။ဆရာတစ်ယောက်လုံးရှိသေးတယ်ဘာမှအားမငယ်နဲ့သမီးလေးသားလေးတို့ရယ်။”လို့အားပေးမိခဲ့ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တာဝန်ကျရာကျောင်းသည်တပ်မိသားစုဝင်များ၏ကလေးတွေအများစုတက်သောကျောင်းဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ကြုံတွေခဲ့ရသောမြင်ကွင်းကစိတ်မခိုင်လျှင်မျက်ရည်ကျမိမည်။ ဖခင်များမှာရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ထွက်ခွာမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျောင်းသို့သူတို့၏သားသမီးကလေးများအားလာရောက်နှုတ်ဆက်ကြရာကျွန်တော့်၏G3ကလေး မိဘ ၃ /၄ဦးခန့်လာကြသည်။ “သမီးစာကြိုးစားနော်/သားစာကြိုးစားနော်/လိမ်လိမ်မာမာနေနော်/ဆရာ့စကား/ဆရာမစကားနားထောင်နော်/ဖေကြီးပြန်လာမှာတဲ့” သားဖြစ်သူသမီးဖြစ်သူလေးများမှရှေ့တန်းထွက်စစ်ယူနီဖောင်းအပြည့်အစုံနဲ့သူတို့၏ဖခင်ကိုဖက်၍ငိုကြသည်။ကျွန်တော်G3အတန်းပိုင်ဆရာဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ရင်းမျက်ရည်ဝဲဆို့နစ်ကြွေကွဲရပါဘီလေ။ဆရာဆိုတော့ဟန်လုပ်ရင်း “သားတို့သမီးတို့ရယ်ဆရာတစ်ယောက်လုံးရှိသေးတာဘာအားငယ်စရာလိုလဲ။သားတို့သမီးတို့ရဲ့ဖေကြီးပြန်လာရင်းဆရာပါလိုက်ကြိုပေးမှာ။ဆရာတစ်ယောက်လုံးရှိသေးတယ်ဘာမှအားမငယ်နဲ့သမီးလေးသားလေးတို့ရယ်။”လို့အားပေးမိခဲ့ပါတယ်ဗျာ။ KG/G1/G2/G3/G-5ကလေးများသည်အသိအမြင်ရှိနေကြဘီလေ။ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ထွက်ရမယ်ဆိုတော့ပြန်လာမယ်ပြောပြီးပြန်မလာတော့တဲ့သူတို့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ဖေဖေတွေအကြောင်းကိုလည်းမြင်တွေ့ကြားသိနေရတော့။ကျောင်းပေါက်ဝကနေပြန်ထွက်သွားနေတဲ့သူတို့ဖခင်တွေကိုလှမ်းပြောလိုက်ပုံက “ဖေဖေရေရှေ့တန်းကမြန်မြန်ပြန်လာခဲ့နော်တဲ့” ကျွန်တော်လဲကလေးတွေဟိုတဖက်အကွယ်ကိုလှည့်ပြီးကျွန်တော့်မျက်ဝန်းကိုကလေးတွေမသိအောင်သုတ်နေမိလေရဲ့😢😢😢 ကျွန်တော့်ရဲ့G3ကလေးတွေခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ထပ်တူထပ်မျှခံစားရမိပါတယ်။မည်သည့်ကလေးမှသူတို့ရဲ့ဖခင်ရှေ့တန်းထွက်မှာကိုမလိုလားကြတော့။ပြန်မလာမှာကိုမလိုလားကြတော့ပါ။ အင်းးးးးးးး စစ်ပွဲတွေအေးငြိမ်းပါစေ။ […]
လားရှိုးလူငယ်များလူမှုကူညီရေးအသင်းယာဉ် လက်နက်ကြီးထိမှန်၊ ၂ ဦးသေဆုံး၊ ၂ ဦးဒဏ်ရာရရှိ
လားရှိုးလူငယ်များလူမှုကူညီရေးအသင်းယာဉ် လက်နက်ကြီးထိမှန်၊ ၂ ဦးသေဆုံး၊ ၂ ဦးဒဏ်ရာရရှိ Saturday, August 17, 2019 “ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ လားရှိုးဘက်မှာတော့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်တာကတော့ AA/TNLA/MNDAA အဖွဲ့တွေနဲ့ပါပဲ။ အခုထိတော့ ကျွန်တော်ဆီတက်လာတဲ့သတင်းတွေအရ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူမရှိဘူးလို့ သိရတယ်။ အဲဒီနေရာကို နယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်” ဟု တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေး ကော်မတီမှ […]
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်စဉ် လားရှိုးလူငယ်ပရဟိတဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းမြင့် လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရပြီး ကွယ်လွန်(ရုပ်/သံ)
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်စဉ် လားရှိုးလူငယ်ပရဟိတဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းမြင့် လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရပြီး ကွယ်လွန်(ရုပ်/သံ) ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၁၇ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့နယ် အထွက်လမ်းတွင် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ဆောင်နေသည့် လားရှိုးလူငယ်များ လူမှုကူညီရေးအသင်း လူနာတင်ယာဉ် လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရပြီး အဆိုပါအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းမြင့်မှာ […]
လားရှိုးမြို့နယ် ပန်ဟက်ကျေးရွာအနီး ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားနေ ဓာတ်ဆီဆိုင်တစ်ဆိုင် မီးရှို့ခံရ
လားရှိုးမြို့ပြင်မှာ ဓာတ်ဆီဆိုင်တစ်ဆိုင် မီးရှို့ခံရ ဒီမနက် ဟိုပိတ်အထွက် တိမ်ဖြူဆီဆိုင်ကို လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုက မီးရှို့ခဲ့ပြီးနောက်မှာ တပ်မတော်ဘက်က လိုက်လံရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ RFA က စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ နမ့်တွန်းရွာအဆင်းမှာ အင်ဂျင်ဝိုင်တွေစုပုံထားပြီး သွားလာလို့မရအောင် လုပ်ထားတဲ့အခြေအနေကို တွေ့ရပါတယ်။ ၁၂ မိုင်ရွာကနေ သိန်နီမြို့ကြားကျေးရွာတွေက ဒေသခံတွေဟာ နီစပ်ရာ ဆွေမျိုးတွေနဲ့ ကျေးရွာ […]
ကင်ဆာရောဂါကနေ သက်သာပျောက်ကင်းလာတဲ့အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ မီးမီးခဲ
သီချင်းချစ်သူတွေတိုင်းရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို ရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် မီးမီးခဲကတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ရှိနေတာဖြစ်ပြီး သူမကတော့ ဖေစ်ဘုတ်ပေါ်မှာ ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ဒီကနေ့မှာလည်း သူ့ရဲ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပရိသတ်တွေကို ရင်ဖွင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ မီးမီးခဲကတော့ “၂၀၁၇ မှာ ရင်သာကင်ဆာ အဆင့် ၄ […]
ကျောက်မဲမြို့အ၀င် အမြောက်တပ်ရင်းကို လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ၀င်ရောက်ပစ်ခတ်
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့အဝင်နားက အစိုးရအမြောက်တပ်ရင်းကို လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တခု က သောကြာနေ့ညမှာ လာရောက် ပစ်ခတ်တာကြောင့် အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး မို့ခံတွေစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြကြောင်း ပြောပါတယ်။ ပြင်ဦးလွင်၊ နောင်ချိုမြို့နယ် ဂုတ်တွင်းတံတားကို မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့က တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး နောက်တနေ့မှာပဲု အခုလိုဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ကျယ်ပြန့် လာတာပါ။ […]